Toamasina – Atrikasa momba ny jono : fiarovana ny faritra ho an’ireo mpanjono madinika | NewsMada
Toamasina – Atrikasa momba ny jono : fiarovana ny faritra ho an’ireo mpanjono madinika
Atrikasa lehibe mandritra ny hefarana no tanterahin’ny minisiteran’ny Jono sy Harena anaty ranomasina, ahitana ny solontena isaky ny distrika rehetra eto amin’ny firenena. Mitarika izany ny sekretera jeneralin’ny minisitera, Tilahy Andrianaranintsoa. Nanomboka ny 14 jona teo amin’ny “Le Neptune” Toamasina. Fihaonana fanaon’ny minisitera isaky ny enim-bolana voalohany ao Toamasina momba ny jono izany.
Amin’izao faharoa izao, afantoka indrindra amin’ny fanatsarana ny fomba fitrandrahana ny harena anaty rano, fiarovana azy ary ny fanatsarana sy fampitaovana ireo mpanjono madinika. Etsy ankilany, ny fampiharana sazy ho an’ireo mpandika lalàna momba ny jono sy fiarovana ny fari-dranomasina.
Mizara roa lehibe ny hoe fari-dranomasina: voalohany, faritra an’ny firenena malagasy sy fizarana izany amin’ny firenena manodidina. Tsy vitsy amin’ ireo mpanjono vaventy vahiny ny miditra an-tsokotsoko manjono anatin’ny fari-dranomasina malagasy izay ilàna fiaraha-miasa lehibe amin’ny foloalindahy mpiaro ny sisintany. Vao notoloran’ny filoham-pirenena sambokely haingam-pandeha izy ireo.
Faharoa, fari-dranomasina voatokana ho an’ny mpanjono madinika fahizay sy ireo mpanjono indositrialy eto an-toerana. Ho an’ ity farany, saika hidiran’ ireo mpanjono indostrialy ny faritra anjaran’ny mpanjono madinika. Efa fandika-dalàna anefa izany. Andrasana izay fehin-kevitra hivoaka aorian’izao atrikasa izao.